OKRSO's family: 2012
ကေအဲန်ယူ၏ ဗဟိုခေါင်းဆောင် ကြီး ၅ ဦးကို ရွေးချယ်လိုက်ပြီ
ယခုကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၁၅ကြိမ်မြောက် ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ) ကွန်ကရက် တွင် ကေအဲန်ယူ၏ ဗဟိုခေါင်းဆောင်ကြီး ၅ဦးကို ယနေ့၌ လျှို့ဝှက်မဲပေး စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြောက် လိုက်ပြီဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အသစ်ရွေးချယ်ခံရသည့် ဗဟိုခေါင်းဆောင် ၅ဦးမှာ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူစေးဖိုး၊ ဒုဥက္ကဌ နော်စီဖိုးရာစိန်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး (၁) ပဒိုစောသောသီဘွဲနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၂) မန်းမန်းမန်းတို့ဖြစ်သည်။
ဒီကေဘီအေ ဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ မျက်မြင်သက်သေ မြ၀တီမြို့ခံတစ်ဦးက “ဒီမနက် သူတို့ ဆန္ဒပြတာ မြ၀တီမြို့ ဘုရင့်နောင်ဈေးကနေ ကြခတ်တောရကျောင်းလမ်းဘက်ကို သွားတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ သံဃာတော် များကို ပြည်လည်တောင်းပန်ဖို့ သူတို့တွေ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ မြို့ကို လှည့်ပြီး ဆန္ဒပြတာပေါ့။ နောက် ဆုံဆည်းမြိုင်ဘက်ကို သူတို့ ပြန်တက် သွား တယ်”ဟု ပြောသည်။
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ၅၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲသို့ လူထုပ ရိဿတ် ၁၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက် ရွေ့ပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံ သားများ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှု ရေးများကို ကျိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ပေးနေ သည့် ဒေါက်တာစင်သီ ယာမောင်၏ အသက် ၅၃နှစ်ပြည့်မွေး နေ့ပွဲအခမ်း အနားသို့ လူထုပရိဿတ် တစ်ထောင်ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။
မဲဆောက်မြို့ရှိ Children Development Center (CDC)ကျောင်းတွင် ယနေ့ကျင်း ပပြုလုပ် သည့် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် မွေးနေ့ ပွဲကို ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာသင်ကျောင်း များမှဆရာ၊ ဆရာမ များနှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံထိုင်းရပ်မိ ရပ်ဖ များ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားကို နံနက်၉နာရီအချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကဖြင့် စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ပြီး ထိုင်းပညာရေးဌာနမှ မဖနိဒါး၊ ကယန်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင် ခွန်ဘာကိုဘမ်း၊ ရွေ့ပြောင်းဆရာ၊ ဆရာမများ ကိုယ်စား ဆရာကျော်ကျော်မင်းထွဋ်၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်စား ဆရာဝင်းကျော်၊ ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (KWO) မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နန်းဒါးအယ်ကလယ် တို့က ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် အား မွေးနေ့ ဂုတ်ပြုစကားများ ပြောကြားခဲ့ကြသည်။
KWO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နန်းဒါးအယ်ကလယ်က “ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ဟာ လူအခွင့်အရေး အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တယ်။ ဒုက္ခအမျိုးမျိုးနှင့်ကြုံတွေ့နေရသော မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေသဖြင့် ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအတွက် သမိုင်းတင်ထိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ဖြစ် တယ်”ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏ သမီး မေသန့်ဇင်မောင် ကလည်း “မေမေ လူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်း လုပ်လို့မရတဲ့အတွက် အဖက်ဖက်ကနေ ၀ိုင်းကူညီပေးမယ့်လူတွေလိုတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း လုပ်သွားရဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးက မေမေ့ကို ကူညီပေးကြပါ။ နောက် ပြီး မေမေ ကျန်းကျန်းမာမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ထို့နောက် ရွေ့ပြောင်းမြန်မာကျောင်းများမှ တေးသီချင်းများ၊ အကပဒေသာများ၊ နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ် ကျန်းမာရေးလုပ်သမားများအဖွဲ့က အမေ့ရဲ့သံစဉ်သီချင်း၊ ကရင်အဆိုတော်များမှ မွေးနေ့ဆုတောင်း တေးသီ ချင်းများဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် မြန်မာအမျိုးသမီး ဓမ္မစကြာအဖွဲ့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာအရ အန္တရာယ်ကင်းအောင် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားအစဉ်အရ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်အား ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ မိသားစုဝင်များက ခြံရံ၍ မွေးနေ့ကိတ်မုန့်တွင် ဖယောင်းတိုင်လေးများ ထွန်းညှိကာ Happy Birthday သီချင်းသီဆိုပြီး ကိတ်မုန့်လှီးခြင်း နှင့် မွေးနေ့ရှင်မှ နှုတ်ခွန်းဆက် ပြောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
မွေးနေ့ရှင် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က “ကြွရောက်လာကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမများကို ကျမအနေနဲ့ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ တရားမျှတမှုရဖို့ ကြိုးစားနေပေမယ့် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် မှုတွေက ရှိနေကြတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ရေရှည်အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိအောင် တစ်ဦးချင်းက ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါစို့လို့ပြောချင်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းနောက် ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်၏ မွေးနေ့ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီမှ ဆရာမန်းရွှေနှင်းမှ ကျေးဇူး တင်စကားပြောကြားခြင်း၊ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အမှတ်တရ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကြွရောက်လာသော ဧည့်ပရိဿတ်များကို နေ့လည်စာကျွေးမွေးဧည့်ခံခြင်း၊ ကရင်ဒုံးယိမ်းအကများဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့် အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာပြီး ဆုံးသွားခဲ့သည်။
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးအခင်းအပြီးတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူ မှုရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင် ငံ ဆေးပညာရှင်များအသင်း (BMA) နှင့် နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ် ကျန်းမာရေး လုပ်သားများ အဖွဲ့(BPHWT)၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် သူဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်တွင်း လတ်တလော အကြမ်းဖက်မှု များအပေါ် ဆိုး ရိမ်ကြောင်း KNU သဘောထား ထုတ်ပြန်
မြန်မာပြည်အတွင်း လတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြည်သူလူထုအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များကို စိုးရိမ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်း အရုံး (KNU) က ယနေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၄ရက်နေ့တွင် သဘော ထား ကြေညာ ချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။
အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့နယ်ရှိ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လူထုလှုပ် ရှားမှုကို အစိုးရအာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်း ဖြိုခွဲသည့် ဖြစ်ရပ်သည် လုံးဝမဖြစ် သင့်ကြောင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာစစ်တပ်များ ထိုးစစ်ဆင် မြှင့်တက်လာမှုကြောင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ခိုလုံသည့် လူထုနေရာများကိုတောင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း စသည့်အခြေအနေ များကို ကြေညာချက်၌ ထည့်သွင်းထားသည်။
KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်မှူး စောလှငွေက ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နေစဉ်အတွင်း အကြမ်းဖက် ဖြစ်ပွားမှုကို မလိုလားကြောင်းနှင့် ထိုဖြစ်ရပ်များ ထပ်မံမဖြစ်ပွားလိုသည့်အတွက် သဘောထား ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကေအိုင်စီသတင်းဌာနကို ပြောသည်။
“တကယ့်လူမြင်ကွင်းမှာ သံဃာတော်တွေတောင် ပါဝင်တဲ့ အနေအထားမှာတောင်မှ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်လိုတယ်လို့၊ ဦးတည် လှုပ်ရှားနေပါတယ်လို့ ကတိပေးတဲ့ကြားက ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်လာတာဟာ ပြည်သူ အတွက်ရော၊ အစိုးရအတွက်ရော ကျနော်တို့နဲ့အတူ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောင်နေသူတွေ အတွက် ပါ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီကိစ္စဟာ အထူးသတိပြုဖို့ လိုတယ်။ ဒါမျိုး ထပ်မဖြစ် ဖို့ အောက်ခြေအထိ ထိန်းဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပြချင်တာပါ”ဟု ၄င်းက ပြော သည်။
KNU ၏ ကြေညာချက်ထဲတွင် မြန်မာအစိုးရ၏ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို KNU မှ ထပ်လောင်း ကြိုဆိုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဗိုလ်မှူး စောလှငွေက “ထပ်လောင်း ကြိုဆိုတယ်ဆိုတာက မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်၊ တိုးတက်တဲ့လုပ်ရပ်၊ မွန်မြတ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ ပိုလုပ်သင့်တဲ့အလုပ် အစကနေအဆုံး အဆက်မပြတ် ရှေ့နောက်ညီညီ ဖြစ်စေချင်တာ ကို နိုးဆော်တဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
ထိုကိစ္စများ ဖြစ်ပွားနေစဉ် နိုဝင်ဘာလ လကုန်းပိုင်းတွင် စတင်ကျင်းပသည့် ၁၅ကြိမ်မြောက် KNU ညီလာခံနှင့် တိုက်ဆိုင်လျက်ရှိရာ ယနေ့အခြေအနေမှာ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းနေ စဉ်ကာလအတွင် ဤကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်ဆိုးများကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရှေ့အလားအလာအတွက် ဆိုးရိမ်စ ရာဖြစ်ကြောင်း KNU ညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေး သဘောတူကာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆယ့်လေး မှ ဆယ့်ငါး (သို့ မဟုတ်) Karen Never Unity မှ Karen National Unity သို့ 
ယနေ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း
ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သောအသွင်ပြောင်းအစိုးရသည်သမ္မတအကြံပေးပညာရှင်များဝိုင်းရံလျက်စစ်တပ်ကြီးစိုးသောအခြေခံဥပဒေအားကိုးဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုရေရှည်အုပ်ချုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ဒီမိုကရေစီအခွင့် အရေးဆိုသည်မှာနိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်း၊သတင်းမီဒီယာနှင်မြို့ ပြလူနေမှုစနစ်တွင်ထိရောက်စွာကျင့်သုံးနိုင်ရန်မလွယ်ကူသေးပေ။ထို့ အတူတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးဆိုသည်မှာလည်းပို၍ပင်အလှမ်းဝေးလျက်ရှိသည်။
အသွင်ပြောင်းအစိုးရ၏ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်သည်ဦးအောင်မင်းဦးဆောင်သောပွဲစားအုပ်စုကတိုင်းရင်းသားများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများလုပ်ပြကာနိုင်ငံခြားအကူအညီများရရှိရန်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။အပစ်အခတ်ရပ်စေ၍စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ရန်အတွက် ရေရှည်အလှူငွေများရရန်မျှော်လင့် လျက်ရှိသည်။ရန်ကုန်မြို့ တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာဟူသောရုံးခန်းဖွင့်၍အစိုးရကျောထောင့်နောက်ခံပြုNGOအဖွဲ့ ပုံစံလှုပ်ရှား(လုပ်စား)လျက်ရှိသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂမှပွဲစားခယူရိုငွေ၇သိန်းရရှိလိုက်သည်။ဆက်လက်ရရှိရန်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲးများထပ်မံလုပ်ပြရမည်။ဦးအောင်မင်း၏အစိုးရNGOလုပ်ငန်း အောင်မြင်လျက်ရှိသည်။တိုင်းရင်းသားများလိုလားသောနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကိုအလေးထားဆွေးနွေးလိုစိတ်မတွေးရပေ။စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေး၊စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုမပြောဆိုရဲသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတု၊ ပြည်ထောင်စုအတုဖြစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များအဖက်ဖက်မှမသိမသာအရှုံးပေါ်နေသည်။ဦးအောင်မင်း၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာနေသောတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များသည်ဦးအောင်မင်း၏လက်လွှတ်စပယ်အပြောအဆိုနှင့်လုပ်ရပ်များကိုယုံကြည်ရန်မှာလွန်စွာခက်ခဲမည်ဖြစ်သည်။ဦးအောင်မင်းအားယုံကြည်သောတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များသည်အပြောနှင့်အလုပ်တစ်ထပ်တည်းကျရန်တွန်းအားပေးသင့်သည်။အပစ်ရပ်ကာလမည်မျှအကြာတွင်ယုံကြည်မှုပြသောအားဖြင့်အစိုးရတပ်မည်မျှရုပ်သိမ်းပေးရမည်ယုံကြည်မှုပိုကြာလာပါကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မည်သို့ ရုပ်သိမ်းမည်ကိုသဘောတူညီမှုရယူပြီးလက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။
စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးမျိုးဦးတည်မည်ဆိုပါက၁၇/၁(သူပုန်ဆက်သွယ်မှု)သည်လုံးဝမလိုအပ်တော့အဖြင့်ထိုအသေးအဖွဲကလေးကိုပင်ရုပ်သိမ်းပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။အစိုးရတပ်များတစ်ဆင့်ချင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်၁၇၁ပုဒ်မရုပ်သိမ်းရေးသည်တဖက်နှင့်တစ်ဖက်ယုံကြည်မှု၏သင်္ကေတဖြစ်သလိုစစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးသို့ဦးတည်သောလုပ်ငန်းစဉ်လည်းဖြစ်သည်။ထိုမှတစ်ဆင့်ဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းအစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှရရှိလာသောသဘောတူညီချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်တိုင်းရင်းသားဒေသအပေါ်စစ်ရေးအမြင်၊စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများလည်းမလိုအပ်တော့ပေ။တိုင်းရင်းသားတို့၏ဘ၀လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အတူ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ လျှောက်လှမ်းရန် ပြင်ဆင်ကြရတော့ မည်ဖြစ်သည်။
ကေအန်ယူ နှင့် ကရင့်တော်လှန်ရေး
ကေအန်ယူ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆိုသည်မှာ ကရင်လူထုကိုယ်စားပြုကရင်အဖွဲ့ အစည်းများစုပေါင်းဖွဲ့ စည်းထားသော အစည်းအရုံးကြီးဖြစ်သည်။ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး၏နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ ကြီးဖြစ်သည်။အနာဂတ်အမြော်အမြင်ရှိသောခေါင်းဆောင်များ၊ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံသောခေါင်းဆောင်များ၊မူနှင့်လမ်းစဉ်ကိုတာဝန်ခံလိုက်နာသောခေါင်းဆောင်ကောင်းများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ယနေ့တိုင်မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
ကေအန်ယူ၏လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များဖြစ်သောKNDOနှင့်KNLAသည်လည်းကရင်ပြည်သူလူထုမှပေါက်ဖွားလာတော်လှန်ရေးရဲဘော်များဖြစ်သည်။နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်သွေးချွှေးများပေးဆပ်ခဲ့ သည်။ထိုကရင်မျိုးချစ်သူရဲကောင်းအာဇာနည်များကိုအားကျအတုယူလိုသောမျိုးဆက်သစ်ကရင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်များသည်မိမိကျရာတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြသည်။ထို့ ကြောင့် ကေအန်ယူသည်နှစ်ပေါင်း၆၀ကျော်အစိုးရအဆက်ဆက်၏နိုင်ငံရေးစစ်ရေးကိုခုခံတော်လှန်လျက်ဖိနိပ်ခံကရင်လူထုဘက်မှအစဉ်အမြဲရပ်တည်ခဲ့ သောသမိုင်းကောင်းကိုအနာဂတ်ကရင်လူငယ်များအတွက်သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။
ထို့ ကြောင့်ကေအန်ယူ၏သမိုင်းအနစ်သာရသည်ကိုယ်ကျိုးရှာအခွင့်ထူးခံသောဖောက်ပြန်ရေးသမိုင်းမဟုတ်၊စွန့် လွှတ်ပေးဆပ်အနစ်နာခံသောသူရဲကောင်းအာဇာနည်တို့ ၏ တော်လှန်ရေးသမိုင်းဖြစ်သည်။မျိုးချစ်ကရင်အဖွဲ့ အစည်းများသည်ကရင့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းကိုပြော၍စည်းရုံးရေးများလုပ်ကြသည်။ထိရောက်မှုရှိသည်။အောင်မြင်မှုရှိသည်။ကရင်လူငယ်များနိုးကြားတက်ကြွမှုရှိလာသည်။အထက်ပါဖော်ပြချက်များသည် ကေအန်ယူနှင့်ကရင့်တော်လှန်ရေး၏ ပကတိ အတွင်းသရုပ်မှန်များဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ သေအတူရှင်အတူဒုက္ခအမျိုးမျိုးကြားမှရန်သူ၏စစ်ရေးနိုင်ငံရေးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ သော ကေအန်ယူခေါင်းဆောင်များသည်လက်ရှိအသွင်ပြောင်းအစိုးရ၏နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပုံစံသစ်တွင်ဝိ၀ါဒကွဲပြားမှုမှစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ရန်သူနှင့်တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာခုခံတော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်ကာလတွင်လွန်စွာစည်းလုံးညီညွှတ်မှုရှိကြလျက်ကရင်လူထု၏အနာဂတ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သောနိုင်ငံရေးစားပွဲဝိုင်းတွင်ညီညွတ်မှုမရှိကြသည်မှာအလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။
အပစ်အခတ်ရပ်ကာလတွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးမှုဖြင့်ဦးအောင်မင်းနှင့် ပူးပေါင်းကာနိုင်ငံခြားကူညီငွေများကိုဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွက်အချိုးကျမျှဝေသုံးစွဲလိုသော ခေါင်းဆောင်နှင့်အပစ်အခတ်ရပ်ခိုင်မာရေးမှနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရလဒ်များပေါ်မူတည်၍ ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးနှင့်လူထုနိုင်ငံရေးကိုဖော်ဆောင်လိုသော ခေါင်းဆောင်များအကြားစိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ ကြသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်ကာလတွင်ဦးအောင်မင်းမှအမေရိကန်မှချက်ချင်းပြန်လာကာဘက်တစ်ဖက်မှနေ၍မီးလောင်ရာလေပင့်လုပ်ပေးခဲ့သည်။မိတ်ဖက်မှရန်ဖက်သို့ ဦးတည်သွားစေရန်ဖြစ်သည်။ရန်ဖက်သို့ ဦးတည်သွားပါကဤအကွဲအပြဲသည်သာမန်အကွဲအပြဲမဟုတ်ပေ။ကေအန်ယူနှင့်ကရင့်တော်လှန်ရေးသမိုင်းတစ်ခုလုံး၏နိဂုံးဖြစ်သွားမည်။မကောင်းသောသမိုင်းဖြင့်ဇာတ်သိမ်းခဲ့ပါကအနာဂတ်လူငယ်များအတွက်သင်စရာမလို၊သိစရာမလို၊အတုယူစရာမလိုသော သမိုင်းဆိုးအမွေဖြစ်သွားမည်မှာသေချာသည်။
ကေအန်ယူ နှင့် ဖွံ့ ဖြိုးရေး
ကေအန်ယူဦးဆောင်သော ကရင့်တော်လှန်ရေးသည် အာဏာရှင်အစိုးရ အဆက်ဆက်အား နိုင်ငံရေး စစ်ရေးအရ ခိုင်မာစွာရပ်တည်ခုခံတော်လှန်ခဲ့ သည်မှာ နှစ်ပေါင်း၆၀ကျော်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ကရင်လူထု၏အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်သော(စစ်ရေး)အလုပ်နှင့်ကရင်ပြည်သူလူထုတို့ ၏အခွင့်အရေးများကိုတောင်းဆိုသော(နိုင်ငံရေး)အလုပ်ကိုသာလုပ်ခဲ့သောသမိုင်းသာဓကများကိုတွေ့ ခဲ့ရသည်။တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေရသောကာလများသာရှိသည့်အတွက်မည်သည့်လူအကျိုးပြုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့သောသမိုင်းသာဓကများမရှိခဲ့ပါ။
ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်အတွေ့ အကြုံမရှိသကဲ့သို့ လုပ်လည်းမလုပ်တတ်ပါပြန်လည်ထူထောင်ရေး(သို့ )ဖွံ့ ဖြိုးရေးဆိုသည်မှာလမ်း၊တံတား၊ဆေးရုံ၊ကျောင်းစသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပေ။ပွင့်လင်းမှု၊ထင်သာမြင်သာရှိမှု၊တာဝန်ယူမှု၊တာဝန်ခံမှုနှင့်အခြေခံလူ့ အခွင့်အရေးစံနှုန်းများကိုလေးစားလိုက်နာတတ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလည်းတစ်ချိန်တည်းလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုလုပ်ငန်းများသည်စိတ်ချရသောနိုင်ငံရေးအခြေအနေ အောက်တွင်မျိုးချစ်ကရင်ပညာရှင်များလူထုအခြေပြုအဖွဲ့ အစည်းများ(KCBOs)ဒေသခံကရင်ပြည်သူလူထု၏ ဘောတူညီချက်းများဖြင့်စုပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ရသော ရေရှည်လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ကေအန်ယူမှခွဲထွက်ကာအစိုးရနှင့်ပူးပေါင်း၍ဖွံ့့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်မည်ဆိုသောဖွံ့ ဖြိုးရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ များသည်ကိုယ်ကျိုးရှာစီးပွားရေးသမားများ ဖြစ်သွားကြသည်။
ကရင်လူထုအပေါင်းအခွန်ကောက်များအဆမတန်ကောက်ခံနေကြသည်။အဆင်မပြေသောမိသားစုများမှသား/သမီးများကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ခံစေ၍်ဖွံ့ ဖြိုးရေးအရေခြုံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တို့ လိုအပ်သောအခွန်ငွေများကိုပေးဆောင်နေကြရသည်။ကရင့်တော်လှန်ရေးရဲဘော်များနှင်ကေအန်ယူခေါင်းဆောင်များအားလည်းဖွံ့့ဖြိုးရေးအရေခြုံကိုယ်ကျိုးသမားများဘ၀ရောက်သွားစေရန်အသွင်ပြောင်းအစိုးရမှ ရေရှည် အကွက်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ ရှိရသည်။
ဦးအောင်မင်းက၄င်းနှင့်အဆင်ပြေသောခေါင်းဆောင်များကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမည်မှာသေချာပါသည်။သို့ သော်ထိုခေါင်းဆောင်သည်မိမိ၏ဂုဏ်သိက္ခာကျကြီးမားမှုနှင့်ကရင်ပြည်သူလူထု၏ယုံကြည်အားကိုးတန်ဖိုးထားမှုများအလိုအလျှောက်ဆုံးရှုံးသွားမည်မှာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင်ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ထို့ ကြောင့်ကရင်ပြည်သူလူထုသည်ကရင့်တော်လှန်ရေးနှင့်ကေအန်ယူအားအထက်ပါဖော်ပြသောဖွံ့ ဖြိုးရေးအရေခြုံလက်နက်ကိုင်ကိုယ်ကျိုးသမားများအဆင့်သို့ လုံးဝအရောက်မခံနိုင်ပါ။
ယခင်စစ်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်း၍ချမ်းသာသွားသော(ကေအန်ယူထွက်)ကရင်ခေါင်းဆောင်ဆိုသူများကရင့်အရေးကို၎င်းတို့ နှင့်မဆိုင်သလိုအတိတ်မေ့ရောဂါကဲ့ သို့ မေ့ထားလိုက်ကြသည်။၄င်းတို့ ဒေသရှိကရင်လူနေမှုဘ၀များမတိုးတက်လာခဲ့ပါ။ကြာလာသောအခါ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင်မိမိလူထုကြိုပန်လည်ဖိနှိပ်သောသာဓကများကိုတွေ့ ရှိရသည်။နောက်ဆုံးတွင်ကရင်လူထုတို့၏မုန်းတီးမှု၊ဆန့်ကျင်မှုများနှင့် ပင် ဘ၀ဇာတ်သိမ်းသွားကြရသည်။
အသစ်က ပြန်စကြစို့ 
ကရင့်တော်လှန်ရေးသည်၁၄ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်သက်တမ်းအတွင်းရန်သူ၏စစ်မြေပြင်ထိုးစစ်များကိုစည်းလုံးညီညွတ်စွာခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ သော်လည်းရန်သူ၏စားပွဲဝိုင်းထိုးစစ်တွင်အယူအဆကွဲပြားမှုကြောင့်သင်ပုန်ချေညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြရသည်။ထို့ ကြောင့်လာမည့်၁၅ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်သို့ တက်ရောက်လာသောကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်မဆုံးနိုင်သောအတွေ့ အကြုံသင်ခန်းစာများကိုပိုက်လျှက်ကရင်လူမျိုးတို့ ၏အနာဂတ်အတွက်ညီညွတ်ရေး၊ငြိမ်းချမ်းရေး၊တန်းတူရေး၊ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေးနှင့်ကရင်လူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သောနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နှင့်မူများချမှတ်၍ထိုလမ်းစဉ်နှင့်မူများကိုတာဝန်ယူ၊တာဝန်ခံသောခေါင်းဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ကြစေရန် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။
ဆယ့်လေးသည် သမိုင်းသင်ခန်းစာ ဆယ့်ငါးသည် အနာဂတ်ပန်းတိုင်
ဆက်လက်၍ ယင်းသဘောထားကွဲလွဲနေမှုများကို (၁၄)ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရတ်အပြီး အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့ အထိ ကေအဲန်ယူ ဖားအံခရိုင်တွင် ကျင်းပသော စတုတ္တအကြိ မ်မြောက် ဗဟိုအမြဲ တမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် အချင်း ချင်း ကျေကျေ လည်လည် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ရက် စွဲ ဖြင့် ကေ အဲန်ယူ ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
စတုတ္တအကြိမ်မြောက် ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ပထမ သဘာပတိအဖြစ် ဒုဥက္ကဌ ပဒိုဒေးဗစ် သာကပေါ၊ ဒုသဘာပတိအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မူးတူးစေးဖိုးတို့ ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ဗဟိုအမြဲ တမ်းကော် မတီဝင်နှင့် ဗဟိုအရံကော်မတီဝင် (၄၀) ဦးတက်ရောက် ခဲ့ဟု ကေ အဲန်ယူ ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
ထို့အပြင် အစည်းအဝေးတွင် ပြီးခဲ့သည့် ၄နှစ်တာ ကာလအတွင်း အဖွဲ့အစည်း၏ အခြေအနေ၊ နိုင်ငံရေးအခြေ အနေများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများ၊ အခြေခံလမ်း စဉ်လုပ်ငန်းစဉ် များကို ပြန် လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ကြကြောင်း ကေအဲန်ယူက ပြောသည်။
စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် နိုင်ငံရေးပြဿနာ များကို ဖြေရှင်းရန်၊ စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင် စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများဆန္ဒနှင့်အညီ ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သွားရန်၊ ကရင်အမျိုးသားများ၏ အကျိုးကျေးဇူး ခံစားခွင့်ရရှိရေးနှင့် တန်းတူညီတူအခွင့်အရေး ရရှိရန် ပြည် တွင်း ပြည်ပ ကရင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းသွားမည်ဟု လည်း ကေအဲန်ယူ ၏ ကြေညာ ချက်က ဆိုသည်။
ကေအဲန်ယူသည် နောက်သက်တမ်း ခေါင်းဆောင်များကို ရွေးချယ်ရန်အတွက် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်မှ ဒီဇင်ဘာလ ၇ရက်နေ့ အထိ ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံကျင်းပရန်ရှိသည်ဟု ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက ပြောသည်။
လာမည့် ညီလာခံတွင် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ ကရင်လူမှု အခြေပြုအဖွဲ့ အစည်း များအား ဖိတ်ကြားထားသည့် အတွက် ဆွေးနွေးစရာ၊ ဖြေရှင်းစရာများကို တက်ရောက်လာသည့် ကိုယ်စားလှယ်များက မေးခွန်းများမေးမြန်း ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကေအဲန်ယူတာဝန်ရှိသူများဘက်မှလည်း ဖြေကြားရမည့် အစီအစဉ်ရမည့် အစီအစဉ်ရှိသဖြင့် ညီလာခံမှာ သတ်ထားရက်ထက် ကြာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေးဖိုး အပါအ၀င် ကေအဲန်ယူခရိုင်၊ တပ်မဟာ ခေါင်းဆောင်အချို့ ၃၁ဦးပါဝင်သည့် အဖွဲ့သည် ဖားအံမြို့သို့ စက်တင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့က KNLA တပ်မဟာများ ဆက်ဆံရေးဖွင့်ရန် ထွက်ခွာခဲ့သည့် ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ KNU ဗဟိုဌာ နချုပ်မှ ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ် မဟုတ်ကြောင်း ကြေညာချက်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့တွင်ပင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သလို KNU ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ဦးအနက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုး၊ ပဒိုစောရောဂျာခင်နှင့် ပဒိုစောဒေးဗစ်ထောတို့ကို တာဝန်မှ ထုတ်ပယ်လိုက်ကြောင်း ကေအဲန်ယူ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ထုတ်ပယ်လိုက်သည့် စစ်ဦးစီးချုပ်နှင့် ကေအဲန်ယူ ထိပ် ပိုင်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို ကေအဲန်ယူဗဟို က အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်နေ့တွင် ကရင်တမျိုးသားလုံး၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် စည်းလုံး ညီညွတ် မှုအတွက် မူလတာဝန်များ အတိုင်း ပြန်လည်ပေး အပ်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို လိုလားကြောင်း ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ သဘောထားထုတ်ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်ထွန်းရေးကို လိုလားကြောင်း တိုင်းရင်းသားပါတီများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ညီနောင် တိုင်းရင်းသား ပါတီများ(Nationalities Brotherhood Forum)က နိုဝင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့တွင် သဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၀ရက်နှင့် ၁၁ရက်နေ့တို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ ၁၃ကြိမ်မြောက် အစည်း အဝေးပြီးနောက် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်သည် ခွဲထွက်ရေးမဟုတ် အပါအ၀င် အချက် ၆ချက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေ ညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ အဖွဲ့ဝင်တခုဖြစ်သည့် ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-PSDP မှ ဒုဥက္ကဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက “ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ပြောဆိုနေကြတယ်။ တချို့ကတော့ ခွဲထွက်ရေးလို့ မြင်နေ ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဟာ စုစည်းဖို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အများသိစေချင်တယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ယင်းကြေညာချက်၌ ဖက်ဒရယ်ကိစ္စအပြင် လက်ရှိပါတီများ၏ အမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခြင်း၊ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုစနစ်ကို ၂၀၁၅တွင် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၏ ပြည်နယ်များ၌ အခြေအနေအရ ကျင့်သုံးရန် မသင့်လျော်သေးခြင်း၊ လက်ရှိ ပြည်နယ်များ၏ အမည်များကို ပြောင်းလဲလိုသည့် အယူအဆများကို လက်မခံခြင်း၊ ရခိုင်အရေးကို အစိုးရမှ သတိကြီးစွာ ဖြေရှင်းပေးလိုခြင်းနှင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက်အိုဘားမား၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်ကို ကြိုဆိုခြင်း စသည့်အချက်များ ပါဝင်သည်။
ညီနောင်ပါတီများ၏ အစည်းအဝေးသို့ လေ့လာသူများအဖြစ် တိုင်းလိုင်(သျှမ်းနီ)အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ဓနုတိုင်းရင်း သားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ၊ အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ၊ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ၊ “၀” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၄၀ကျော် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၎င်းအပြင် လေ့လာသူအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသားပါတီများကလည်း ညီနောင်ပါတီများနည်းတူ ဖက်ဒရယ်စနစ် မှာ ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ကြောင်းကို လက်ခံခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် သျှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမို ကရေစီပါတီ၊ ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ကယန်းအမျိုးသားပါတီတို့ ဖြစ်သည်။
တစ်ဆက်တည်းပင် ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ၏ ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် အဖွဲ့အမည်ပြောင်းလဲမှုတွင် မူလ ခေါ်ဝေါ်သော ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ-Nationalities Brotherhood Forum ကို ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖက်ဒရေးရှင်း (Nationalities Brotherhood Federation)အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျားရောက် လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူ ကရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ၀န်ကြီးချုပ်မှ ဆုချီးမြှင့်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဗစ်တိုရီးယားပြည်နယ်တွင် ရောက်ရှိအခြေချနေသော ကရင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သည့်ေ
န်ာစေးထူးအဲ့မိုးရိုကို လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် သြစတြေးလျား ဝန်ကြီးချုပ် Hon. Julia Gillard က (Prime Minister’s Above and Beyond Award) ဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်နေ့က Cathy Brunton မြို့ရှိ Italian Social Club of Werribee ခမ်းမဆောင်တွင် နော်စေးထူးအဲ့မိုး ရိုကို သြစတြေးလျား ဝန်ကြီးချုပ် Hon. Julia Gillard က ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဂုဏ်ပြုကာ ယင်းဆုကို ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
သူမသည် လက်ရှိ သြစတြေးလျား လူမှုကွန်ယက်တွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ကာ ၎င်းကွန်ယက်၏ လုပ်ငန်းများကို ဆက် လက် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
“ကေအဲန်ယူ ခေါင်းဆောင်တိုင်း လူထုအသံကို နားစွင့်ဖို့၊ ပူးပေါင်းပြီး ပြတ်သား ရဲရင့်ကြဖို့” တောင်ကလေးဆရာတော် မိန့်ဆိုမြွက်ကြား။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့နယ်ရှိ တောင်ကလေးဆရာတော် ဦးပညာသာမိအား လက်ရှိ ကေအဲန်ယူ
အပေါ် အမြင်သဘောထား ကို ကေအိုင်စီမှ သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
မေး - ဆရာတော်အနေနဲ့ KNU ရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ရပ်တည်ချက်တွေကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ ဆရာ တော်ရဲ့ အမြင်သဘောထားကို သိချင်ပါတယ်။
ဖြေ - KNU ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးဇင်းရဲ့ သဘောထားအမြင်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် KNU ခေါင်းဆောင်တိုင်း ဟာ ကရင်လူထုရဲ့အသံကို နားစွင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲလို ကရင်လူထုရဲ့အသံကို အလေးမထားဘူးဆိုရင်တော့ အခုလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးက အောင်မြင်မှုရဖို့ ခဲယဉ်းပါလိမ့်မယ်။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း မညီမညွှတ် ဖြစ်နေတာတွေ၊ အပြန်အလှန် လေးစားမှု အားနည်းနေတာတွေ၊ နိုင်ငံ ရေးအပိုင်းကို သိရှိနားလည်ဖို့ အားထုတ်မှုလျော့ရဲတာတွေဟာ ကရင်လူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက် ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်း စဉ်(မူဝါဒ)ကို အဟန့်အတားဖြစ်ပြီး ကြန့်ကြာစေပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကို ပြန်ဝင်လာဖို့ဆိုတာကလည်း ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ဒီအခက်အခဲကြားမှာ KNU ဟာ သူများတွေထက် ပိုပြီး ခက်ခဲနေတာဟာလည်း ၀မ်းနည်းစရာပါ။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဟာ နိုင်ငံရေးနည်းဗျူဟာတွေ ဘက်ပေါင်းစုံ သိရှိနားလည်ဖို့ လိုအပ်သလို နိုင်ငံရေး အခင်း အကျင်းတွေကို သိရှိနားလည်ဖို့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုလည်း ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ KNU အဖွဲ့ အစည်းထဲမှာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမရှိဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်ယူလေ့လာမှုမရှိဘူး။ ဒီအ တိုင်းသာ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ KNU အစည်းအရုံးကြီးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အဆင်တန်ဆာက ပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဦးဇင်းပြောချင်တာက ကရင်လူထုတွေ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထဲမှာ ကြီးကြီးငယ်ငယ် အရွယ်စုံပေါ့။ အကြီးလည်း အကြီးအလျောက်၊ အငယ်လည်းအငယ်အလျောက် ဘက်ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီစေချင်တယ်။
ပြီးတော့ တို့လူမျိုးဟာ ကရင့်အမျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ အစိုးရသော ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း၊ သာယာဝပြော စွာနဲ့ နေနိုင်ဖို့အတွက် သက်ကြီးတွေရော၊ သက်ငယ်တွေပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ ရဲရဲရင့် ရင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဲလို ရဲရဲရင့်ရင့် လုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုရင် ကရင်အမျိုးသားတို့ ရည်မှန်းထားတာတွေ လက်ဝယ် မုချ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကရင်အမျိုးသားအားလုံးဟာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကရင့်သမိုင်းကြောင်း ပဲဖြစ်ဖြစ် သိရှိနားလည်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ တို့ကရင်လူမျိုးတွေဟာ အချင်းချင်း ရိုသေလေးစားရမှာကို ၀န်လေးကြတယ်။ ကရင်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူ မျိုးတွေရဲ့ မဖြောင့်မတ်တဲ့ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုတွေကိုကျတော့ လိုက်ယုံတယ်။ လိုက်စုဆောင်းတယ်။ လိုက်ပြီး ဖက်တွယ် နေတတ်တယ်။ အဲလိုစိတ်ထားတွေဟာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထဲမှာ မထားပါနဲ့တော့လို့ ဦးဇင်းပြောချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကြီးကို မှာချင်တာကတော့ ကရင်အမျိုးသားတရပ်လုံးအတွက် ရပ်တည်နေတယ် လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်ထားတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားသူတွေလာပြီး ဖျားယောင်းသွေးဆောင်နေတာတွေ၊ လာပြီး ချီးမွမ်းကြွားဝါနေတာတွေ၊ လာပြီးလိမ်လည်နေတဲ့သူ တစ်ဦးတယောက်ကိုမှ မယုံကြည်မိပါစေနဲ့။ ကရင်အမျိုးသားတရပ် လုံး စည်းလုံးညီညွှတ်ကြပြီးတော့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနဲ့ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ခြင်း၊ အေးချမ်းသာယာခြင်း၊ သုခ ပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဝယ်ပိုက်နိုင်ပါစေလို့ ဦးဇင်း စိတ်ဆန္ဒရှိကြောင်း မှာကြားချင်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့နယ်ရှိ တောင်ကလေးဆရာတော် ဦးပညာသာမိအား လက်ရှိ ကေအဲန်ယူ
နောက်ဆုံး KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကြီးကို မှာချင်တာကတော့ ကရင်အမျိုးသားတရပ်လုံးအတွက် ရပ်တည်နေတယ် လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်ထားတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်လူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားသူတွေလာပြီး ဖျားယောင်းသွေးဆောင်နေတာတွေ၊ လာပြီး ချီးမွမ်းကြွားဝါနေတာတွေ၊ လာပြီးလိမ်လည်နေတဲ့သူ တစ်ဦးတယောက်ကိုမှ မယုံကြည်မိပါစေနဲ့။ ကရင်အမျိုးသားတရပ် လုံး စည်းလုံးညီညွှတ်ကြပြီးတော့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေနဲ့ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ခြင်း၊ အေးချမ်းသာယာခြင်း၊ သုခ ပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဝယ်ပိုက်နိုင်ပါစေလို့ ဦးဇင်း စိတ်ဆန္ဒရှိကြောင်း မှာကြားချင်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂။ (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်တွင်းရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို နိုဝင်ဘာလ မကုန်ခင် ရွေးချယ်နေပြီ
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီး၌ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို အသစ်ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန် လာမည့် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလလကုန်တွင် အပြီးသတ် ရွေးချယ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
မြ၀တီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်တင်က “တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ မြ၀တီမှာလည်း ရပ်ကွက်တွေမှာ စတင်စီစဉ်နေပြီ။ နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ ပြီးအောင် လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့ရှိ ရပ်ကွက်ပေါင်း ၉ခုရှိသည့်အနက် အမှတ်-၃ ရပ်ကွက် အပါအ၀င် ရပ်ကွက်အချို့ မှာ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဖားအံမြို့ အမှတ်-၃ရပ်ကွက် ဆယ်အိမ်မှူးတစ်ဦးက “ကျနော်တို့ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး ၄၇ဦးကနေပြီးတော့ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ရာမှာ ကျန်ရှိတဲ့ ဆန်ကာတင် ၃ယောက်ထဲက နဂိုအဟောင်းတစ်ယောက်ကိုပဲ ကျနော် မဲပေးခဲ့ တယ်။ ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်က သူတို့အကြောင်းကို သိပ်မသိထားတော့ မဲမပေးရဲဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ”ဟု ပြောသည်။
ယင်းသို့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ရန်အတွက် တစ်ရက်ကြိုတင်ပြီး လာရောက်ဖိတ်ကြားသော်လည်း သာမန်ရပ်ကွက် ပြည်သူများမှာ မဲပေးခွင့်မရှိဘဲ နားထောင်၊ ကြည့်ရှုရန်အတွက်သာ သွားရမည်ဖြစ်ပြီး မသွားချင်ပါကလည်း နေနိုင်ကြောင်း လာ ရောက်ဖိတ်ကြားသူက ပြောဆိုသည့်အပေါ် မသွားရောက်ခဲ့ကြောင်း ဖားအံမြို့ရှိ အမှတ်-၃ ရပ်ကွက်နေ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဆို သည်။
ဖားအံမြို့ရှိ ရတနာဒီပ အမှတ် (၉)ရပ်ကွက်တွင်လည်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ် ပြန်လည် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ရပ်ကွက်အုပ် ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်မှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့မှ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်ဟု အသိပေးထားသည်။ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေ အခန်း(၃) ပုဒ်မ(၅)ပါအရ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံမည့်သူမှာ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အတွင်း တစ်ဆက်တည်း ဆယ်နှစ် အနည်းဆုံး နေထိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ အမှန်တကယ် နေထိုင်သူ အသက် (၂၅)နှစ်ပြည့်သူ ဖြစ်ရမည်ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ထို့အပြင် ယင်းဥပဒေအရ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်ရန် သင့်တင့်သော ပညာအရည်အချင်းရှိသူ၊ စားဝတ်နေရေး ဖူလုံမှုရှိသူ၊ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စုများအတွင်း နေထိုင်ရသူ၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ၊ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်ရသူနှင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မတရားအသင်း များနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း မရှိသူ စသည့်အချက် (၁၁)ချက် ပါရှိသည်။
Japan Platform မှ ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ကရင်ပြည်နယ် သွားရောက်လေ့လာမည်
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ ကူညီထောက်ပံ့ထားသည့် Japan Platform NGO အဖွဲ့သည် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ကရင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ယခုလ ဒုတိယပတ်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ လာမည့် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ဒေသနှင့် လူထုအခြေအနေများကို သွားရောက်လေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့တွင် ဂျပန်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဌာန အပါအ၀င် Japan Platform အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၂၀ကျော်တို့က ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Karen National League (KNL-Japan)၊ Karen National Union (KNU-Japan)၊ Karen National Foundation Japan – KNF ၊ Oversea Karen Organization Japan(OKOJ) အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် ၆ဦးနှင့် တွေ့ဆုံကာ ကရင်ပြည်နယ်၌ လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ အပါအ၀င် ပြည်သူလူထု အခြေအနေများကို အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ် အတွက် လိုအပ်သည့်ကဏ္ဍများတွင် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် Japan Platform အဖွဲ့ အနေဖြင့်လည်း ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထဲတွင် မြန်မာအစိုးရနှင့် သွားရောက်ညှိနှိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု KNU – Japan တာဝန်ခံ စောမျိုးခိုင်ရှင်းက ပြောသည်။
၎င်းက “သူတို့တွေက ကျနော်တို့ကိုတွေ့ပြီး ကရင်ပြည်နယ်ထဲက ဒေသခံတွေရဲ့ နေထိုင်မှုစရိုက်တွေ၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ရိုးရာ တွေ ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုပြီး မေးတယ်။ သူတို့က ဒါတွေကို အရင်လေ့လာပြီးမှ ကရင်ပြည်နယ်ထဲကို သူတို့သွားမယ်လို့ အဲလို ပြောတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ NGO အဖွဲ့ပေါင်း ၂၅ခုနှင့်ဖွဲ့ထားသော Japan Platform သည် ဂျပန်အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကရင်အမျိုးသားများအခြေအနေ၊ ဒေသတွင်းအခြေအနေ၊ ဒုက္ခသည်များ နေရာပြန်လည်ချထားရေး၊ ကျေးရွာများ ပြန်လည်ထူ ထောင်ရေးနှင့် ကရင်ပြည်သူများအား ထောက်ပံ့ရေးတို့ကို မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းကာ လုပ်ဆောင်သွားကြရန် အစီအ စဉ်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့သည့် KNL-Japan ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လက်ရှိအချိန်သည် အစိုးရနှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဆင့် ဆွေးနွေးနေဆဲသာ ဖြစ်သည့်အ တွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံများနှင့် သောက်သုံးရေအတွက် ရေသန့်စက်ရုံများသာ ပထမဦးဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ပေးသင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြခဲ့သည်ဟုလည်း OKO-Japan အဖွဲ့မှ တွဲဖက်အ တွင်းရေးမှူး စောလင်းစိန်က ယခုလို ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ကတော့ ပွင့်ပွင်းလင်းလင်းပဲ သူတို့ကို ပြောပြလိုက်တယ်။ အခု ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာသာ တိုက်ပွဲတွေကငြိမ်နေတာ၊ ရှမ်းနဲ့ ကချင်တွေဘက်မှာတော့ ဆွေးနွေးနေစဉ်မှာပဲ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်း လမ်း တွေဖောက်တာပြင်တာတွေ၊ တံတားဆောက်တာတွေ အပါအ၀င်ပေါ့နော်။ တခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မလုပ်သင့်သေးဘူးလို့ တော့ တင်ပြခဲ့တယ်”ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါ Japan platform နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ဂျပန်ရောက် ကရင်များအနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုပါက ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်များနှင့် ဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်သင့်သလို ဒေသခံလူထု၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကိုသာ အဓိကဦးတည်စေလိုကြောင်း အကြံပြုခဲ့သည်ဟု စောမျိုးခိုင် ရှင်းက ပြောသည်။
“သူတို့ ပြည်တွင်းထဲဝင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းရမှာပဲလေ။ အဲလိုဆိုရင် ကရင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုး ရေးမှာ ကရင်လူထုက အကျိုးခံစားရမှာ နည်းတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုအတွက် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီနဲ့ ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်သင့်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ၂၀၁၅ခုနှစ်အထိ စောင့်ဖို့တော့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
Japan Platform အဖွဲ့အနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်သို့ စတင် ဝင်ရောက်ကူညီမှုများကို ပြည်တွင်းသက်ဆိုင်သော အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ညှိနှိုင်းလက်တွဲပြီး မဖြစ်မနေ အဆင့်ဆင့် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ခေါင်းဆောင်တွင်း သဘောထားကွဲလွဲမှု သင်ပုန်းချေလိုက်ကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်ပြောဆို
အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို ရှေးရှု၍ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးပြီး သင်ပုန်းချေလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU က ယနေ့ သဘောထား ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံခရိုင် ကေအဲန်ယူထိန်းချုပ်နယ်မြေ လေးဝါးစခန်း၌ အောက်တိုဘာလ ၂၅ရက်မှ ၂၆ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ် သော ကေအဲန်ယူ၏ အထူးအရေးပေါ် အစည်းအဝေးသို့ ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီနှင့် ဗဟိုအရံအမြဲတမ်း ကော်မတီဝင် ၄၀ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ထုတ်ပယ်ခံရသော ခေါင်းဆောင် ၃ဦး၏ ကိစ္စကို အချေအတင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနောက် ယင်းသို့ သင်ပုန်း ချေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကေအဲန်ယူ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက “ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိစ္စကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ သူ့ ဘက်က သူမှန်၊ ကိုယ့်ဘက်က ကိုယ်မှန်နဲ့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုလို့ မဆုံးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးကို ရှေ့ရှုပြီး သင်ပုန်းချေလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲဆိုပြီးတော့ အဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကို မူလ တာဝန်ပြန်ပေးပြီး ၁၅ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက် အထိ ဆက်လက် တာဝန်ယူသွားဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ အထူးအရေးပေါ် အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖြစ်ပွားသည့် သဘောထားကွဲလွဲမှုများမှာ ကေအဲန်ယူ ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အားနည်းချက်သာဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကို ခေါင်းဆောင်များအားလုံး တာဝန်ခံကာ ကျေအေးခဲ့ကြကြောင်း နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ကရင်ပြည်သူလူထုများလည်း ကေအဲန်ယူအတွင်း အုပ်စုကွဲမှုကို မဖြစ်ပွားလိုကြောင်း ဗိုလ်မှူးစောလှငွေ က ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် ကေအဲန်ယူ၏ သဘောထားကြေညာချက်အရ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အားနည်း ချက်များကို ခေါင်းဆောင်များမှ ဦးစီးရှေ့ဆောင်၍ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာကာ အခြေခံလမ်းစဉ်နှင့်အညီ အတူတကွ ဆက်လက် ချီတက်သွားကြမည်ဟူ၍ ဖော်ပြထားသည်။
ကေအဲန်ယူ၏ ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မန်းငြိမ်းမောင်က “ကေအဲန်ယူအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခပေါ်မှာ တမျိုးသား လုံးက စိုးရိမ်မှုတွေ ကြီးမားစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အလေးအနက်ထားပြီး ရေရှည် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကို ရှေ့ရှုလုပ်ဆောင်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားကွဲလွဲမှုများကို သင်ပုန်းချေခဲ့ပြီးဖြစ် ၍ လာမည့် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးကို ယခုလ ၃၁ရက်နေ့တွင် စတင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမှတဆင့် ၁၅ကြိမ် မြောက် ညီလာခံကို နိုဝင်ဘာလ စတုတ္ထပတ်တွင် ကျင်းပသွားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
စစ်ပြေးရှောင် တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များ အကူအညီ ရရှိရေးအတွက် UNFC ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ရှိ။
အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ဖိုးခွါးလေး (ကေအိုင်စီ)
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စစ်ပြေးရှောင် တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များ အကူအညီရရှိစေရေးအတွက် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်း
သားလူမျိုးများ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ(UNFC)သည် နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်းနှင့် တွေ့ဆုံရန် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ညအချိန်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ယင်းခရီးစဉ်ကို ခွန်ဥက္ကာ ဦးဆောင်ကာ နိုင်ငံခြားရေးဒုတာဝန်ခံ ဒေါက်တာခင်မောင်အပါအ၀င် ဦးခွန်ဝါး၊ ဗိုလ်မှူး ကြီး လှအောင်၊ ကိုအောင်ဝင်းကြည် စသည့် အဖွဲ့ဝင် ၁၉ဦးပါဝင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးသည့် နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း၏ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့် ၇ ရက်ကြာသွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်ဟု UNFC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။
နိုင်ဟံသာ “အဓိကတော့ တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီရေးပေါ့။ ပြီးတော့ (မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း) တိုင်းရင်းသားတွေက စစ်ဒဏ်ကြောင့် ဆင်းရဲ၊ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို နိပွန်ဖေါင်းဒေးရှင်းရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ သိစေရန် ဆွေးနွေးတင်ပြဖို့ သွားတာပါ”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားသော UNFC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းက ယမန်နေ့က တိုကျိုမြို့ တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယခင် UNFC နှင့် သဘောထားသည့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါး စသည့် လူသားချင်းစာ နာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သန်း ပေးအပ်ရန် သဘောတူလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဂျပန် နိပွန်ဖေါင်းဒေးရှင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးရန် ယခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က ဇင်းမယ်မြို့တွင် UNFC နှင့် သဘောတူထားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
UNFC ကို တိုင်းရင်းသားလက်ကိုင်အဖွဲ့ (၁၂)ဖွဲ့ဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တစ်နေရာတွင် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KIA မှလွဲ၍ ကျန်အဖွဲ့များမှာ မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ရရှိထားသည်။
Photo: စစ်ပြေးရှောင် တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များ အကူအညီ ရရှိရေးအတွက် UNFC ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ရှိ။ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်။ ဖိုးခွါးလေး (ကေအိုင်စီ) မြန်မာနိုင်ငံရှိ စစ်ပြေးရှောင် တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များ အကူအညီရရှိစေရေးအတွက် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ ဖယ်ဒရယ်ကောင်စီ(UNFC)သည် နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်းနှင့် တွေ့ဆုံရန် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ညအချိန်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယင်းခရီးစဉ်ကို ခွန်ဥက္ကာ ဦးဆောင်ကာ နိုင်ငံခြားရေးဒုတာဝန်ခံ ဒေါက်တာခင်မောင်အပါအ၀င် ဦးခွန်ဝါး၊ ဗိုလ်မှူး ကြီး လှအောင်၊ ကိုအောင်ဝင်းကြည် စသည့် အဖွဲ့ဝင် ၁၉ဦးပါဝင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီ ပေးသည့် နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်း၏ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့် ၇ ရက်ကြာသွားရောက်မည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်ဟု UNFC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။ နိုင်ဟံသာ “အဓိကတော့ တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီရေးပေါ့။ ပြီးတော့ (မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း) တိုင်းရင်းသားတွေက စစ်ဒဏ်ကြောင့် ဆင်းရဲ၊ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို နိပွန်ဖေါင်းဒေးရှင်းရဲ့ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ သိစေရန် ဆွေးနွေးတင်ပြဖို့ သွားတာပါ”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားသော UNFC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းက ယမန်နေ့က တိုကျိုမြို့ တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယခင် UNFC နှင့် သဘောထားသည့် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါး စသည့် လူသားချင်းစာ နာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သန်း ပေးအပ်ရန် သဘောတူလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ဂျပန် နိပွန်ဖေါင်းဒေးရှင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးရန် ယခု ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့က ဇင်းမယ်မြို့တွင် UNFC နှင့် သဘောတူထားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် နိပွန်ဖေါင်းဒေးရှင်းသည် ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အပါဝင် အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများနှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးခဲ့သည့်အခါ ၎င်းအကူအညီကို မပေးသင့်သေး ကြောင်း အစိုးရဝန်ကြီးများက ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် နိပွန်ဖေါင်းဒေးရှင်းမှ ပေးမည့် အကူအညီကို ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာတစ်စောင် UNFC က လက်ခံရရှိခဲ့သေးသည်။ ယခု ဂျပန်ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားများ အတွက် လူမှုရေးအားဖြင့် ဂျပန်ကူညီမည့်ကိစ္စသည် မြန်မာအစိုးရက သဘောတူလိုက်သည်ဟု UNFC နိုင်ဟံသာက ဆက်ပြောသည်။ “အစိုးရနဲ့ နိပွန်ဖေါင်ဒေးရှင်းတွေ ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့ ဒီတိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်တွေ အကူညီပေး ရေးကို အစိုးရကလည်း လက်ခံသဘောတူလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။ UNFC ကို တိုင်းရင်းသားလက်ကိုင်အဖွဲ့ (၁၂)ဖွဲ့ဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တစ်နေရာတွင် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KIA မှလွဲ၍ ကျန်အဖွဲ့များမှာ မြန်မာအစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု ရရှိထားသည်။
ကရင်ပြည်၏ ပထမဦးဆုံး ထဘာကော် ခရီးသွားလာရေးကုမ္ပဏီဖွင့်လှစ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၈ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းသူးလေ (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့ရှိ ရတနာဒီပအမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ကားကွင်းကြီးအနီးတွင် ကရင်ပြည်နယ်၏ ပထမဦးဆုံးသော “ထဘာကော်”ခရီးသွားလာရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကို ယမန်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၊ တောတောင်သဘာဝအလှများကို ပြည်တွင်း နှင့် နိုင်ငံတကာမ
ှ လာရောက်ကြည့်ရှုပြီး နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရရှိရန်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားချင်သည့် ကရင်လူမျိုးများ အလွယ် တကူသွားလာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထဘကော် ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် နော်ယုဇန၀ါက ပြောသည်။
နော်ယုဇန၀ါက “ကျမတို့ ပြည်နယ်ထဲမှာလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေ လာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရတဲ့ သဘာဝအလှတရားတွေ အများကြီးရှိတယ်။ နောင်လာမယ့် မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့လည်း ဒီလုပ်ငန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာအောင် ကျမတို့ က ရင်တွေအနေနဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကို ပထမဆုံးခြေလှမ်းစလိုက်တဲ့ သဘောပါ”ဟု ပြောသည်။
ထဘာကော် ကုမ္ပဏီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ယမန်နေ့ နံနက် ၈နာရီအချိန်တွင် ကရင်ကလေးငယ်လေးများက ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့် လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းပြခဲ့ကြကာ အခမ်းအနားသို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ကရင်မိတ်ဆွေအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ဘားအံမြို့ရှိ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းများ အရာရှိများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြောင်း အခမ်းအနားတက်ရောက်ခဲ့သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ပိုးကရင်ဘာသာစကားအရ ကုမ္ပဏီ၏ “ထဘာကော်”ဟူသည့်အမည်သည် မြန်မာဘာသာအရ ကမ္ဘာကြီးကို ထိန်းသိမ်းပါ ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်ရပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ (Save the World)ဖြစ်သည်။
ယင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်တွင် မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် နော်ယုဇန၀င်း၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် နန်းအေးအေးသွယ်နှင့် ဒေါက်တာစောစိုးနိုင်အပြင် အမည်မဖော်လိုသည့် ရှယ်ယာဝင်နှစ်ဦး၊ စုစုပေါင်း ကရင်ရှယ်ယာဝင် ၅ဦးတို့ စုပေါင်း လုပ် ဆောင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း အစပိုင်းအနေဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့ဖြစ်ပြီး ပြည်ပ ခရီးစဉ်အဖြစ် အာရှနိုင်ငံများနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများသို့ ပို့ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်းနှင့် ခရီးသွားလာရေးအတွက် လောလောဆယ်တွင် ပုဂ္ဂလိက ကားများကိုသာ ငှားရမ်းသုံးစွဲသွားမည်ကြောင်း သိရသည်။
တဆက်တည်းမှာပင် ဧည့်လမ်းညွှန်အနေဖြင့်လည်း ဘားအံဒေသခံလူငယ်များကို ဦးစားပေးငှားရမ်းသွားပြီး ရန်ကုန်မှ ဧည့်သည်လမ်းညွှန်များကိုလည်း ငှားရမ်းသွားမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ ခရီးသွားကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လိုပါကလည်း လာရောက်ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းလည်း နော်ယုဇန၀ါက ပြောသည်။
“ဒေသခံလမ်းပြတွေနဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်အောင် ကျောင်းပြီးတဲ့လူတွေ အယောက် ၂၀လောက်ကို သင်တန်းပေးထားတာ မနေ့ ကပဲ သူတို့သင်တန်းဆင်းပြီးသွားတယ်။လုပ်ငန်းပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ ခရီးစဉ်တွေက သုံးရက်ဆိုဘယ်လောက်၊ ၅ရက်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပေါ့နော်၊အဓိကတော့ ခရီးစဉ်တွေကို ရောင်းသွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
ထဘာကော် ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ပထမဦးခရီးစဉ်အဖြစ် လာမည့် နိုဝင်ဘာလထဲတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရား ဖူးခရီးစဉ်အဖြစ် စတင်ပို့ဆောင်ပေးတော့မည်ကို ကြားသိရကြောင်း ဘားအံဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်များအနေဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ထဲတွင် ဟိုတယ်ကဲ့သို့ တည်းခိုနိုင်သည့် ရိုးရာအိမ်ငယ်လေးများ တည် ဆောက်ပြီး ခရီးသည်များငှားရမ်းနေထိုင်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုလည်း နော်ယုဇန၀ါက ပြောသည်။
ထဘာကော် ခရီးသွားလာရေးကုမ္ပဏီလီမီတက်ကို ဟိုတည်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းဌာနသို့ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး တရားဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်စာ ရရှိပြီးစီးကြောင်းနှင့် ၎င်းကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အမြတ်ငွေ ငါး ရာခိုင်နှုန်းကို အမျိုးသားရေးနှင့် အများပြည်သူလူထုလိုအပ်ချက်အတွက် အသုံးပြုသွားမည်ဟု သိရသည်။
KNU အတွင်း စည်းလုံးညီညွှတ်မှု ဆက်လက်တည်ရှိစေရေး OKRSO ဆုတောင်း
အောက်တိုဘာလ ၈ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU အတွင်း စည်းလုံးညီညွှတ်မှု ဆက်လက် တည်ရှိစေရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ပြည်ပရောက်ကရင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့-OKRSO ရုံးတွင် ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲတစ်ခုကို ယမန်နေ့ညနေ ၆နာရီတွင် နာရီဝက်ကြာ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
OKRSO ၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ စောမင်သီက “လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရနဲ့ KNU တို့ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကနေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အဖွဲ့ အတွင်း ပြဿနာတွေကို ကျနော်တို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ရဲ့ မိခင်အဖွဲ့အစည်း KNU အတွင်း မှာ အချင်းချင်း စည်းလုံးမှုတွေရဖို့ ဆုတောင်းပွဲလုပ်ရတာပါ”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် KNU နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာတွင် ခွဲခြားဆွေးနွေးမှုများ ရှိခဲ့သည့်အပေါ် KNU အတွင်း ခေါင်းဆောင်များအ ကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပွားလာရကြောင်းနှင့် စေတနာမှန်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မဟုတ်ကြောင်း OKRSO မှ ရှုမြင် သည်ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ယမန်နေ့က OKRSO သည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အသစ်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း အခမ်းအနားကို ပြုလုပ်ကျင်းပ ခဲ့ပြီး ထိုတင်မြှောက်ပွဲအပြီး ညနေပိုင်းတွင် ဆုတောင်းပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ယင်းဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနားတွင် OKRSO အဖွဲ့ဝင် အပါအ၀င် ဘန်ကောက်တွင် လူမှုရေးနှင့် ကရင်စာပေယဉ်ကျေးမှု လုပ် ဆောင်နေကြသူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် လူငယ်များ စုစုပေါင်း ၄၀ဦးကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့သည် ကရင်အမျိုးသားအလံတော် ကို ကိုင်ဆောင်၍ ဖယောင်းတိုင်မီးကိုယ်စီ ထွန်းညှိကာ ၀တ်ပြု ဆုတောင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဆုတောင်းပွဲတွင် ပါဝင်သူများမှ “ကရင်လူထုတရပ်လုံး ညီညွတ်ကြပါစေ၊ ကရင်လူထုတရပ်လုံး ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ၊ ကရင်လူထုတရပ်လုံး တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ”ဟု တညီတညွှတ်တည်း ရွတ်ဆိုကြကာ ဆုတောင်းပွဲကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ကေအဲန်ယူ၏ လက်ရှိအခြေအနေအပေါ် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၅ရက်နေ့က ကရင်လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း ၃၀ကျော် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြရာ အချင်းချင်း ပြန်လည်စုစည်းညီညွှတ်စေလိုသည့် သဘောထားကို ဒေါက်တာစင်သီယာမောင် အပါအ ၀င် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်အချို့က ကေအဲန်ယူခေါင်းဆောင်များထံ သွားရောက် အသိပေးခဲ့ကြသေးသည်။
Oversea Karen Relive Social Organization-OKRSO ကို စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် အတိဒုက္ခရောက်သူများနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ရင်း ဒုက္ခမျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများကို လူမှုရေး ကူညီထောက်ပံ့ရန် ရည်ရွယ်၍ ၁၉၉၂ခုနှစ်၊ ဇွန် လက စတင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည်။
ပြည်ပရောက်ကရင်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ လူမှုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ OKRSO ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင်အသစ်များရွေးချယ်တင်မြောက်မှုခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဘန်ကောက်မြို့ OKRSO ရုံးတွင်အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင်အသစ်များရွေးချယ်မှုအစီအစဉ်အပြီးတွင်လက်ရှိမိခင်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)မှပြုလုပ်နေ သောငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှပေါ်ပေါက်လာသောစိတ်ဝမ်းကွဲမှုများသည်ကရင်အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ကရင်လူထုအတွင်းများစွာဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။
ထို့ ကြောင့် ဘန်ကောက်ရောက် ကရင်လူငယ်များစုပေါင်း၍ကရင်လူမျိုးအားလုံးကိုယ်စား ညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲတစ်ရပ်ကို OKRSO ရုံးတွင် ယနေ့ ညနေတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ကြပါသည်။
ဆုတောင်းပွဲ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို အောက်တွင် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Karen Musical instrument by TMN
Karen Musical Instrument by Saw
Promoting Karen Cultural activities @ Thai PBS
Promoting Karen Cultural events at Thai PBS
ကရင်လူမျိုးများရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်မှုနှင့်နေထိုင်လှုပ်ရှားမှုဘ၀ဓလေ့များကို (Thai PBS)မှ အစီအစဉ်တင်ဆက်ပြသခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ကရင်မျိုးနွယ်စုများရဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်မှုနှင့်နေထိုင်လှုပ်ရှားမှု ဘ၀ဓလေ့များကို ထိုင်းအသံလွှင့်ဌာန Thai PBS မှစက်တင်ဘာလ (၂၁-၂၃)ရက်နေ့ အထိ သက်ဆိုင်ရာမျိုးနွယ်စုအလိုက်.. ထိုင်းအသံလွှင့်ဌာန Thai PBS တွင် (၃)ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
နေ့ အလိုက်အစီအစဉ်များပြုလုပ်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို အောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
photo by Hale Koto
Photo by Saw Eh Tho
Photo credit Mee Linn Phyu
Photo credit San Mu (facebook)
ศิลป์สโมสร : พหุวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง (ကရင်လူမျိုးများရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်မှုနှင့်နေထိုင်မှု)
ศิลป์สโมสร : พหุวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง
ကရင်ရိုးရာ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ မဲဆောက်မှာ ကျင်းပ
ဒီကနေ့ ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့မှာ ကရင်ရိုးရာ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ တောရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ မဲဆောက်ဒေသတွင်း ရောက်ရှိနေတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ စုပေါင်းပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ကရင်ရိုးရာ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့ တောရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ မဲဆောက်ဒေသတွင်း ရောက်ရှိနေတဲ့ ကရင် တိုင်းရင်းသားတွေ စုပေါင်းပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့နေကြစဉ်။
အဆိုပါ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ အခမ်းအနားသို့ ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ပြီး အဲဒီသ၀ဏ်လွှာမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသား အားလုံးအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းအေးဆေးစွာ နေထိုင်လိုသော ဆန္ဒအပါအ၀င် ကရင့်ရိုးရာ အစဉ်အလာတရပ်ကို သိရှိနားလည်အောင် ကြိုးစားဖော်ထုတ် ထိန်းသိမ်းဖို့ တိုက်တွန်းထားကြောင်း ကရင့်ရိုးရာ ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာ ကျင်းရေးကော်မတီရဲ့ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ မန်းမျိုးမြင့်က အခုလို ဖတ်ပြပါတယ်။
"ရိုးရာဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် စာပေစကားများကို ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်သမှုပြုကြပြီး လူ့ အခွင့်ရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အခြေခံမည့် တိုးတက်မှုနှင့် လွတ်လပ်မှုကို အခြားလူမျိုးများ ကဲ့သို့ တန်ဖိုးထားကာ ငြိမ်းချမ်းအေးငြိမ်းစွာ နေထိုင်လိုသော ဆန္ဒအပါအ၀င် အခြားကောင်းသော အရာများ ဖော်ပြလိုက်သောနေ့လည်း ဖြစ်သည်။"
ချည်ဖြူဖွဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ အပါအ၀င်အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားများလည်း လာရောက်တာ တွေ့ရပြီး လူပရိသတ် လေးထောင်ကျော် တက်ရောက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကရင့်ရိုးရာ အဆိုအကနဲ့ ခေတ်ပေါ် ဂီတပွဲတွေ လည်းပါဝင် ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
သဂုတ်လ ၂၈ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ)
ချည်ဖြူဖွဲ့ပွဲ တက်ရောက်သူ ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နန်းစေးအွာက “အခုလို တက်ရောက်လာတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒေသခံလူထုအားလုံးလည်း ၀မ်းသာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တော့ KNU နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ သိပ်မရဲကြ ဘူး။ ၁၇/၁(မတရားအသင်း ဆက်သွယ်တဲ့ပုဒ်မ)ကို မပယ်ဖျက်သေးတဲ့အခါကျတော့ ကြောက်ကြတာပေါ့နော်။ အဲဒီ တရားမ၀င်အသင်း ဆိုတာ မရှိတော့ဘူးဆိုရင် အားလုံးက ဒီထက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်”ဟု ပြောသည်။
ယင်းအခမ်းအနားကို မနက်(၁၀)နာရီတွင် စတင် ကျင်းပခဲ့ပြီး အစီအစဉ်အရ ချည်ဖြူဖွဲ့ပွဲ အစဉ်အလာအတိုင်း ဦးဆောင်ကြသည့် လူကြီး သူမများက ရိုးရာလိပ်ပြာခေါ်ခြင်း၊ လက်ချည်မင်္ဂလာပြုခြင်း၊ ကရင်လူငယ်မောင်မယ်များက ရိုးရာသီချင်း သီဆိုခြင်းနှင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေး ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကရင်လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ ကျင်းပသော ပွဲတော်များအနက် ၀ါခေါင်လအတွင်း ကျင်းပသည့် ချည်ဖြူဖွဲ့ ပွဲတော်သည် အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ တောင်ပေါ်၊ မြေပြန့် ကရင်လူမျိုးများသာမက ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးတွင် သွားရောက် အခြေ ချ နေထိုင်နေကြသော ကရင်လူမျိုးများလည်း အစဉ်အလာမပျက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း ဆင်နွှဲကျင်းပကြသည်။
“ကရင်အမျိုးသားတွေ အခုလို စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ တွေ့နိုင်မယ့် ပွဲတော်တွေကနေတဆင့် အမျိုးသားရေးကိစ္စတွေကို အမြဲတမ်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ကရင်အမျိုးသားထုထဲမှာလည်း မကြာခင် ကျနော်တို့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝလိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်မိ ပါတယ်”ဟု မန်းမျိုးမြင့်က ဆက်ပြောသည်။
ယခု ပြုလုပ်သည့် ချည်ဖြူဖွဲ့ပွဲသည် ဖားအံမြို့နယ် အတိုင်းအတာအနေဖြင့် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဇော်မင်းမှ ငွေကျပ်ဆယ်သိန်းနှင့် KNU မှ ငွေကျပ်သုံးသိန်း ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီထံ လှူဒါန်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ကရင်လူမျိုးတို့၏ ရှေးလူကြီးသူမများ အဆိုအရ ၀ါခေါင်လသည် မကောင်းဆိုးဝါးများ ပျော်မြူးသည့် လရာသီဖြစ်ပြီး ထိုမကောင်းဆိုးဝါး ၀ိညာဉ်များ မိမိတို့၏ သားသမီး၊ မြေး၊ မြစ်များအပေါ် လာရောက်စွဲကပ်ပါက မကောင်းသည့် အတိတ်နိမိတ်၊ ဘေးဥပါဒ် ကျရောက်တတ် သည်ဟု ယုံကြည်ကြကာ ၎င်းကို ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် လက်နှစ်ဖက်၏ လက်ကောက်ဝတ်တွင် ချည်ဖြူများ ချည်နှောင်ပေးခြင်း ဖြစ်
OKRSO 20th Anniversary part 6
OKRSO 20th Anniversary part 7
OKRSO 20th Anniversary part 5
OKRSO 20th anniversary part 4
OKRSO 20th anniversary part 3.mpg
OKRSO 20th anniversary part 2
OKRSO 20th anniversary part 1
Place: Sukhawadee garden , Pataya , Chonburi, Thailand.
Photo by :Saw Eh Tho(OKRSO)
ကေအဲန်ယူ၏ ဗဟိုခေါင်းဆောင် ကြီး ၅ ဦးကို ရွေးချယ်လု...
ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ၅၃နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲသို့ လူထ...
ဆယ့်လေး မှ ဆယ့်ငါး (သို့ မဟုတ်) Karen Never Unity ...
Japan Platform မှ ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ကရင်ပြည်နယ် ...
စစ်ပြေးရှောင် တိုင်းရင်းသားဒုက္ခသည်များ အကူအညီ ရရှိ...
ကရင်ပြည်၏ ပထမဦးဆုံး ထဘာကော် ခရီးသွားလာရေးကုမ္ပဏီဖွ...
KNU အတွင်း စည်းလုံးညီညွှတ်မှု ဆက်လက်တည်ရှိစေရေး OKRS...
ศิลป์สโมสร : พหุวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี...